SWMC-370-DTH Gurguurte kala go'ay oo ku rakiban haydarooliga hoos-u-ool-daloolka qodista |
Qalabka qodista SWMC-370-DTH waxaa si weyn loogu isticmaalaa miinooyinka godka furan sida sibidhka, biraha, macdanta dhuxusha, meelaha laga qodo dhagaxa laga qodo, qodista godad qarxinta ee tareenka, wadada weyn, ilaalinta biyaha, tamarta biyaha iyo mashaariicda dhismaha difaaca qaranka.
Gurguurta oo kala go'an oo ku rakiban hawo-mareenada hoose ee godka qodista
Qalabka qodista SWMC-370-DTH waxaa si weyn loogu isticmaalaa miinooyinka godka furan sida sibidhka, biraha, macdanta dhuxusha, meelaha laga qodo dhagaxa laga qodo, qodista godad qarxinta ee tareenka, wadada weyn, ilaalinta biyaha, tamarta biyaha iyo mashaariicda dhismaha difaaca qaranka. Xajmiga daloolkeeda ee cabbirkiisu waa 90-178mm, kaas oo lagu qalabayn karo noocyo kala duwan oo kombaresarada hawada ah si loo xaqiijiyo qodista cadaadiska sare ee DTH.
Jidhka jirku waxa loo nashqadeeyey aaladda cufisjiidka, taas oo yaraynaysa iska caabinta is jiid jiidka inta lagu jiro socodka, kor u qaadaya adkaynta xidhiidhka ka dhexeeya jidhka iyo jidka, oo ka dhigaya shasis-ka qodista qodista mid waara oo xasillan. Markaad ka gudubto jiirada, iyo fuulitaanka dhaadheer waxay gaari kartaa 35 darajo.
2. Rotary yareeya
Ilkaha yareeya wuxuu leeyahay kor u kac heerkul hooseeya, culays-qaadis sare iyo nolol adeeg oo dheer, kaas oo hagaajin kara xawaaraha wareega iyadoo loo eegayo adkaanta dhagaxa. Madaxa Rotary waxa uu ku qalabaysan yahay Eton hydraulic motor si uu u gaadho xaalada shaqada ee degan. Waxay ku qalabaysan tahay xoojinta isku-dhafka shoogga si loo yareeyo xoogga falcelinta saamaynta ee godadka qodista si ay u dhaawacdo wax-yaraha wareegga.
3. Qalab ka saara siigada
Boodhka ururiyaha wuxuu qaataa tignoolajiyada buufinta boodhka nadiifinta, kaas oo leh awood nadiifin boodh adag, hufnaanta ka saarista boodhka sare, feejignaanta qiiqa yar, heerka dareeraha hawada hooseeya, isticmaalka tamarta yar, hawlgal xasiloon oo la isku halayn karo, wuxuuna ilaaliyaa caafimaadka hawl-wadeenada. Qalabka shaandhada tayada sare leh, hufnaanta ka-saarista boodhka iyo nolosha adeegga waa la dammaanad qaaday.
● QIIMAHA ugu waaweyn
Dhexroor dalool qodista 90-178mm
Cadaadiska Hawada ee Shaqada 1.7-2.5 Mpa
Wareegga roganaya 3280N.m
Xawaaraha leexashada 0-110 Rpm
Lulid jir simbiriirixan Bidix 54°/ Midig 50°
Qaab dhismeedka silbanaya 135°
Dalbashada kor u kaca Bidix/Midig 45
Qodista kor u kaca jiif 22°/65°
Karti darajada 35°
Soo saaraha Matoorka YUCHAI Diesel iwm
Awood la qiimeeyay 73.5/92 Kw
Hore: SWMC-360-DTH gurguurta kala go'ay oo ku rakiban haydarooliga hoos-u-godka godka
Xiga: SWMC-380-DTH Qalab qodista oofwareenka ah